Tag: email qashin ah | Martech Zone
Tag: email qashin ah
Liistada Cinwaanka Emailka Nadiifinta: Maxaad Ugu Baahan Tahay Nadaafadda Emailka Iyo Sida Loo Doorto Adeeg
Jimce, Maarso 5, 2021 Tuesday, April 27, 2021 Douglas Karr
Suuq geynta emailka waa ciyaar dhiig. 20-kii sano ee la soo dhaafay, waxa kaliya ee lagu beddelay emaylku waa in kuwa diraa emayllada wanaagsan ay sii wadaan in ciqaab intan ka sii badan leh ay ku soo kordhaan bixiyeyaasha adeegga iimaylka. In kasta oo ISPs iyo ESPs ay gebi ahaanba isku duwanaan karaan haddii ay doonaan, haddana si fudud ma yeelaan. Natiijadu waxay tahay in uu jiro xiriir iska soo horjeed ah oo u dhexeeya labadooda. Bixiyeyaasha Adeegga Internetka (ISPs) xannibaadda Bixiyeyaasha Adeegga Emailka (ESPs) then ka dibna ESPs ayaa lagu qasbay inay xayiraan
Dhammaan Suuqgeynta Emailka ee Sizzles-ka Aan Khayaamin
Axad, Nofeembar, 24, 2013 Axad, Nofeembar, 24, 2013 Douglas Karr
Faahfaahintan ka socota LeadPages, xalka bogga degista, waxay siisaa xoogaa aragti weyn oo ku saabsan suuqgeynta iimaylka iyo tirakoobka SPAM. Fure u ah sawir-gacmeedkan ayaa ah imisa emayl sharci ah oo ku dhex jira galka qashinka. Fursaduhu waa halka ay inbadan oo kaa mid ahi joogaan, sidoo kale. E-maylka ku-saleysan rukhsadda ayaa sii wadaya inuu u horseedo xirmada heerarka guji-dhaafka ah iyo heerarka beddelashada. Ganacsiyo badan ayaa dadaalkooda oo dhan gelinaya istiraatiijiyado wax soo iibsi si ay u kaxeeyaan taraafiko badan oo ay iloobaan siyaabaha
Amniga Emailka iyo Adeegsiga Caalamka
Saturday, April 6, 2013 Monday, May 6, 2013 Douglas Karr
Waxaan dhawaan isku helnay waxoogaa dhibaato ah bixiyaha emaylkeena markii aan dib ugu soo celinay qaar ka mid ah cinwaanada emayl ee koontadayada. Taan iyaga ka mid ah ayaa booday, waxaan helnay xoogaa cabashooyin ah SPAM qofna aad buu u xanaaqay oo ay ula xiriireen adeeg bixiyahayaga shaqsi ahaan si ay uga dacwoodaan. Waxaan ku dhaawacnay inaan ka saarno cinwaanada emailka koontada si waafaqsan codsi ka yimid bixiyaha emaylka. Tirakoobka tirakoobkan ka socda Tusaalaha E-mailka ayaa si toos ah u tilmaamaya
Emailku Ma Dhintay?
Talaado, Janaayo 3, 2012 Talaado, Janaayo 3, 2012 Douglas Karr
Markii aan aqriyay sheekadii dhaweyd ee ku saabsaneyd koox IT ah oo ka dhisan Boqortooyada Midowday oo mamnuucday emaylka, waxay ahayd inaan istaago oo aan ka fikiro waxqabadkeyga maalin kasta iyo inta iimaylku iga xado maalin wax soo saar leh. Su’aasha ayaan u horgeeyay akhristayaasheena iyadoo la adeegsanayo codbixinta Zoomerang dad aad u yar ayaana u maleeyay in iimaylka uu dhiman doono waqti dhow. Dhibaatada, sidaan qabo, maahan email. Marka emaylka loo isticmaalo si wax ku ool ah, waa
Sirta Qarsoon ee Suuqgeynta Emailka iyo Bixiyeyaasha Adeegga Internetka
Khamiista, Noofembar 8, 2007 Wednesday, September 4, 2013 Douglas Karr
Sir qarsoon ayaa ku jirta Warshadaha Emailka. Waa maroodiga qolka ku jira oo aan cidina ka hadlin. Qofna kama hadli karo arinkaas cabsi uu ka qabo ciqaab darteed dadka loo malaynayo inay booliis ku shaqeynayaan. SPAM MA LEH WAX LAGU SAMEEYO OGOLAANSHADA Taasi waa sax. Halkan ayaad ka maqashay. Waan ku celin doonaa… SPAM MA LEH WAXYAABO LAGU SAMEEYO OGOLAANSHO Mar kale… SPAM MA LEH WAXYAABO LAGU SAMEEYO Ogolaanshaha